NeoCoin စျေး - အွန်လိုင်း NEC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NeoCoin (NEC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NeoCoin (NEC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NeoCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
NEC – NeoCoin
Market ကဦးထုပ်: $5 779 292.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NeoCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NeoCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NeoCoinNEC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.171NeoCoinNEC သို့ ယူရိုEUR€0.145NeoCoinNEC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.131NeoCoinNEC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.157NeoCoinNEC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.56NeoCoinNEC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.08NeoCoinNEC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.8NeoCoinNEC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.639NeoCoinNEC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.229NeoCoinNEC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.239NeoCoinNEC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.9NeoCoinNEC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.33NeoCoinNEC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.91NeoCoinNEC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹12.84NeoCoinNEC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.28.54NeoCoinNEC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.235NeoCoinNEC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.259NeoCoinNEC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.31NeoCoinNEC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.19NeoCoinNEC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥18.09NeoCoinNEC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩204.43NeoCoinNEC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦64.93NeoCoinNEC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽12.59NeoCoinNEC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.75
NeoCoinNEC သို့ BitcoinBTC0.00002 NeoCoinNEC သို့ EthereumETH0.000442 NeoCoinNEC သို့ LitecoinLTC0.00299 NeoCoinNEC သို့ DigitalCashDASH0.00199 NeoCoinNEC သို့ MoneroXMR0.00198 NeoCoinNEC သို့ NxtNXT14.2 NeoCoinNEC သို့ Ethereum ClassicETC0.0241 NeoCoinNEC သို့ DogecoinDOGE49.48 NeoCoinNEC သို့ ZCashZEC0.00208 NeoCoinNEC သို့ BitsharesBTS6.61 NeoCoinNEC သို့ DigiByteDGB6.6 NeoCoinNEC သို့ RippleXRP0.573 NeoCoinNEC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00611 NeoCoinNEC သို့ PeerCoinPPC0.62 NeoCoinNEC သို့ CraigsCoinCRAIG80.72 NeoCoinNEC သို့ BitstakeXBS7.56 NeoCoinNEC သို့ PayCoinXPY3.09 NeoCoinNEC သို့ ProsperCoinPRC22.23 NeoCoinNEC သို့ YbCoinYBC0.000112 NeoCoinNEC သို့ DarkKushDANK56.81 NeoCoinNEC သို့ GiveCoinGIVE383.04 NeoCoinNEC သို့ KoboCoinKOBO40.36 NeoCoinNEC သို့ DarkTokenDT0.158 NeoCoinNEC သို့ CETUS CoinCETI511.26
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 17:00:03 +0000.